I-75 YENKQANTOSI YENKOSANA YEXESHA LESI-4 ITRAILER EVUZAYO, ISAMENTE, IPLANI KWAYE YEYIPHI INDAWO EBANGELA UMDLA ENOKUBONWA? - IINKQUBO ZETV
INkosana yeDragoni ngumboniso omnye oya kukwenza utshintshe ingqondo yakho malunga neeDragons. Umboniso udibanisa izinto ze
INkosana yeNamba ngumboniso omnye oya kukwenza utshintshe ingqondo yakho malunga neeDragons. Umboniso udibanisa imiba yefantasy, umdlalo ohlekisayo, isenzo, idrama kunye nokuzonwabisa. Ixesha lokuqala lenkosi yenamba laqala ukubonwa ngoSeptemba 2018 kunye nexesha lesibini elaliqala ngoFebruwari 2019 kanti, Ixesha lesithathu laqala ukubonwa ngoNovemba 2019.
Ukusukela ngoko, umboniso ufumene isiseko sabalandeli, uninzi lwabantu oluxhalabileyo kwiXesha leNkosana yeNkosana. Kulindeleke ukuba uthotho lukhuphe ixesha lesine kungekudala.
Olunye lothotho lweNetflix oluthandekayo, iNkosana yeDragoni, yasonwabisa ngamaxesha amathathu ukuza kuthi ga ngoku ngebali layo eliyimfihlakalo. Ngoku lixesha lesine. Apha sikulethele uhlaziyo lwamva nje malunga neXesha leNkosana yeDrako.
Ixesha leNkqantosi leNkqantosi 4: Luya Kukhutshwa nini olu luhlu?
Ixesha leNkosana yeNkosana yesi-4 yile okwangoku ukuba ube nomhla wokukhutshwa . Nangona kunjalo, iNetflix inayo iqinisekisile ukukhupha yonke amaxesha asixhenxe omboniso.
Abafaki bebebuza imibuzo malunga nomhla wokukhutshwa kwexesha, kwaye iNetflix inokuthi isibhombise ngokukhutshwa kwangoko kunokuba bekulindelwe.
Akukho mathandabuzo okuba inkanuko nothando oluya kwiNkosana yeDragoni luchaphazele isibhakabhaka emva kokuphela kwexesha lesithathu. Okulusizi kukuba, ngenxa yobhubhane we-COVID-19 oqhubekayo, kunzima ukuqikelela ukuba liza kuqala nini ixesha lesine.
Abenzi bezinto ababhengezi ngokusesikweni umhla wokukhutshwa kweNkqantosi yeNkosana yeXesha le-4.
Uya kuba nini umtoli wexesha le-8 kwi-netflix
Ixesha leNkosana yeDragoni yesi-4: Ngubani na oya kuBonwa kwiXesha lesi-4?
Inkqubo ye- Abalingisi beNkosana yeNamba kubandakanya abalinganiswa kunye nabadlali babo belizwi. Inkosana kaKatolis uEzran, evakaliswe nguSasha Rojen, unomphefumlo onokuthetha nokuqonda izilwanyana.
Umntakwabo-Ezran umninawa wakhe uCallum, umntu wokuqala ukuba namandla angaqondakaliyo kodwa engenalo ilitye lokuqala, uvakaliswa nguJack DeSena.
Umbulali we-Moonshadow Elf uqesha uRayla aka Paula Burrows, ohamba noCallum no-Ezran kwiindawo zabo zokuphepha ukubuyisela inamba yeqanda kubazali bokuzalwa.
UJason Simpson aka Viren, oyena mdlali uphambili, kunye nomcebisi kuKumkani Harrow. UViren yingcali yomlingo omnyama kwaye ufuna ukuba wonke umntu emhlabeni afunde obu bugcisa.
UClaudia aka Racquel Belmonte uyintombi kaViren kunye nomlingo onetalente kakhulu.
USoren aka Jesse Inocalla ulijoni elisisidenge.
Iimuvi ezifanayo noJohn wick
Ixesha leNkosana yesi-4: Liza kuba yintoni ibali malunga nalo?
Phantse zonke izehlo zoluhlu lubekwe eXadia ilizwe eliyintelekelelo kunye nobukumkani bemilingo. Amandla eli hlabathi ahlala kwezi zinto zintandathu, ilanga, inyanga, iinkwenkwezi, umhlaba, umoya, nolwandle.
Njengoko abantu sele beqalisile ukusebenzisa umlingo omnyama, oku kubeka emngciphekweni ubomi babantu abahlala apho.
Ekugqibeleni, abantu ababanjwa besebenzisa umlingo omnyama baphoswa kude ziingxilimbela zeXadian kunye needragons.
Ewe, okwangoku asinawo umhla wokukhutshwa, kodwa umboniso uya kubuya ngokuqinisekileyo.
Abalandeli bonwabile kakhulu, kwaye umboniso awuzange ubaphoxe abalandeli bayo. Ke masilinde de iindaba ziphume.
ifilimu icula nini ukuphuma kwiithiyetha
Ukunyuka kwekhuselo lomlinganiso we-anime umhla wokukhutshwa
Amaphupha amnandi ekhitshini ixesha lesi-5 isiqendu 1
jeremy renner mission ayinakwenzeka
Izono ezi-7 ezibulalayo ixesha elitsha
apho ukubukela iingqondo zolwaphulo-mthetho